संविधान भन्दा गाँस बासकै चिन्ता छ चेपाङलाई | We Nepali
संविधान भन्दा गाँस बासकै चिन्ता छ चेपाङलाई
२०७२ साउन १० गते १२:५१
रत्ननगर (चितवन), १० साउन । टन्टलापुर घाममा सुक्खा डाँडोमा फुको माटोको आली लगाउँछन् शक्तिखोर नयाँ टाँडीका ३४ वर्षीय लालबहादुर चेपाङ । आकासे पानीको भर भएकाले पानी पर्ने बित्तिकै रोपाइँ छोप्नु छ ।
पल्लो पाखामा प्रगति सामुदायिक वनको हलमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि छलफल चलिरहेको थियो । प्रहरीको बाक्लै उपस्थिति सिधै देखिन्छ । कार्यक्रममा भए गरेका कुरा सुनिन्छ र प्रस्टै बुझिन्छ ।
“अब अधिकार लेखेको छ, केही जानी श्रीमान् श्रीमती छुट्यो भने सात वर्षसम्म बच्चा पालेर फेरि बूढालाई फर्काउनुपर्ने रे, यत्रो हुर्कायो बढायो, जिन्दगीभर बच्चा श्रीमतीले राख्न पाउनुपरयो, मायाँ त हामीलाई बढी हुन्छ नि” काखमा बच्चा खेलाउँदै हीराले मनको कुरा खोलिन् ।
यो कुरा उनीहरूले आफ्नै घर परिवारबाट थाहा पाएका रहेछन् । सुरुमा कुरा खुस्किन्छ कि भनेर सचेत हुँदै थिए उनीहरू । विस्तारै कुरा खुल्दै गयो । परिवारमा यो एउटा सत्य कथा नै बन्न पुगेछ ।
हीरा र नरबहादुर श्रीमान् श्रीमती । हीराका मामा पर्दा रहेछन् बमबहादुर, सोमबहादुर र लालबहादुर । उनीहरू क्रमशः जेठा, माइला र साइला दाजुभाइ हुन् । सोमबहादुरकी श्रीमती शान्ति पाँच वर्षअघि श्रीमान् छाडेर अर्कैसँग गइन् । एक छोरा र एक छोरी गरी दुई बच्चा अहिले सोमबहादुरसँगै छन् । छाडेर गएकी शान्तिले ती बच्चा हुर्काएपछि फिर्ता गरेकी रहिछन् । हीराले भनिन् – “माइजूले पालेर हुर्केपछि छाडेर जानुभएको ।”
यही जानेर उनले आमासँगै बच्चा हुनुपर्छ भनेकी हुन् । घरमा बढी रक्सी खाएर बस्ने गरेकाले उनी गएकी भनेर उनीहरूले नै भने । “खै सर ! रक्सी नखाई मनले मान्दैन, छाडौँ भनेको हो, जाँगरै आउँदैन,” रक्सी नखान गरेको आग्रहमा लालबहादुरले जवाफ दिए । रक्सीकै कारण जेठा बमबहादुरकी श्रीमती पनि अर्कैसँग गएकी रहिछन् ।
चुनाव हुँदा नेता आएर यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भनेको उनीहरूलाई ताजै छ । “अहिले खै ? “घाम लाग्यौँ अस्तायो” हीराले भनिन् । उनीहरूसँग यसरी कुरा गरिरहँदा मङ्गलबार शक्तिखोरको उक्त सामुदायिक वनभित्र सुझाव सङ्कलनपछि कार्यक्रम समापनका क्रममा सभासद् शेषनाथ अधिकारी बोल्दै थिए ।
पीडित सीमान्तकृत जनताका लागि सरकारले सहयोग गर्ने अधिकारीले बताइरहँदा ती चेपाङ हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेर उडाइरहेका थिए । सुझाव सङ्कलन केन्द्रमा ती परिवारमध्येका वृद्ध बुबा जीतबहादुर गएका थिए । सुझाव दिन नभई के भएको रहेछ भनेर हेर्न गएका हुन् उनी । तर उनले खासै कुरो बुझेनछन् ।
“उही दलित, चेपाङको कुरो आयो, नागरिकताको कुरो आयो, बाउ (बाबु) आमा भए नागरिकता हुन्छ रे, अलिपछि आको कुरोको मेसै भएन न पो सर ।” तपार्इंहरूलाई के भए राम्रो हुन्थ्योभन्दा जीतबहादुरले भने – “खान लाउन पाइँदैन, पाए त हुन्थ्यो ।” नाम छुट्छ कि भन्ने चिन्तामा थिए उनी । “नाम चाहीँ जीतबहादुर लेख्नु है सर” अन्त्यमा उनले आग्रह गर्दै भने ।
शक्तिखोरको प्रगति सामुदायिक वनको जुन हलमा सुझाव सङ्कलन हुँदै थियो, त्यहाँको भित्तामा २५ भन्दा बढी चेपाङका नाम लेखिएका छन् । उनीहरू सबै सामुदायिक वनका सदस्य छन् । राजबहादुर, जयबहादुर, दिलबहादुर, मानबहादुर, साुनमायाँ, हरिमायाँ, पार्वतीलगायत छन् ।
सभासद् बसेको पछाडि ब्यानरसँगै उनीहरूका नाम छन् । तर भित्तामा लेखिएका चेपाङसमेत सुझाव दिन आएनन् । सामुदायिक वनका कार्यालय सचिव विकास श्रेष्ठ २२ घर चेपाङ सदस्य रहेको र दुई जनामध्ये सुकमायाँ प्रजा कार्यसमिति सदस्य तथा दिलबहादुर चेपाङ सल्लाहकार रहेको बताउंछन् ।
सुझाव सङ्कलन केन्द्रमा रहेका करिब २०० प्रतिनिधिमध्ये जम्मा तीन जना चेपाङले बोले । एकजना अर्कै जातिका केपीकिरण शर्माले चेपाङका कुरा उठाउँदै एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनमा जोड दिए । केही चेपाङ बाहिर झ्यालबाट रमिता हेरिरहेका थिए । बोल्ने चेपाङ कुनै राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थामा काम गरेका अगुवा थिए । चेपाङ गाउँमै भएको सुझाव सङ्कलनमा उनीहरूको न्यून उपस्थिति हुनु विडम्बना थियो । चितवनमा करिब ३२ हजार भन्दा चेपाङको बसोबास छ ।
शक्तिखोरका स्थानीय दलबहादुर चेपाङले चेतनाको र जानकारीको अभावमा चेपाङको सहभागिता कम भएको बताए । उनले खान लगाउन पर्याप्त भए भने चेपाङ खुसी हुने अनुभव सुनाए । त्यसका लागि सीप, शिक्षा र रोजगारी दिनुपर्ने अर्का चेपाङ दामरामले बताए । सुझाव दिने क्रममा बोलेका तीन जना महेन्द्र चेपाङ, दलबहादुर चेपाङ र डिल्लीराज चेपाङले करिब करिब एउटै कुरा भने । उनीहरूले लिखितरूपमै सुझाव दिए ।
उनीहरूको माग यस्तो छ
४. समावेशी रूपमा राज्यको अङ्गमा सहभागी गराइनुपर्ने ।
नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कमा ६८ हजार चेपाङ रहेका छन् । चेपाङका अनुसार एक लाखभन्दा बढी चेपाङ नेपालमा छन् । सभासद् काशीनाथ अधिकारीले सुझाव जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पुरयाउने बताए । चेपाङहरू छ महिना अनिकाल र छ महिना सहकालमा बस्छन् । खाद्यान्न सकिएपछि जङ्गली गिठ्ठा र भ्याकुरमा उनीहरूको जीवन निर्भर रहन्छ ।